DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA XIAOMI REDMI 3 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ndị ọrụ na - egwu egwu ma ọ bụ na - ebudata faịlụ site na iji ndị ahịa BitTorrent na - eche nsogbu nke ọdụ ụgbọ mmiri emechi. Taa, anyị chọrọ inye ọtụtụ nsogbu maka nsogbu a.
Hụkwa: Otu esi emeghe ọdụ ụgbọ mmiri na Windows 7
Esi emeghe ọdụ ụgbọelu
Iji malite, anyị na-achọpụta na ọ bụ na ndagwurugwu na-emechi ndagwurugwu ndị dị na Microsoft: oghere njikọ njikọ dị mfe, n'ihi na site na ndị na-awakpo ha nwere ike izuru data onwe ha ma ọ bụ mee ka arụ ọrụ ahụ kwụsị. Ya mere, tupu ịga n'ihu na ntụziaka dị n'okpuru ebe a, tụlee ma ọ bara uru maka ihe ize ndụ ahụ.
Ihe nke abụọ ị ga-eburu n'obi bụ na ụfọdụ ngwa na-eji ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri. Naanị, maka otu mmemme ma ọ bụ egwuregwu, ị ga-emeghe otu ọdụ ụgbọ mmiri ọ na-eji. Enwere ohere ịmeghee ihe niile nwere ike ịchọta ozugbo, ma nke a anaghị akwado ya, ebe ọ bụ na nke a, nchebe nke kọmputa ga-adị njọ.
Meghee "Chọọ" ma malite dee okwu ahịrị nchịkwa nchịkwa. Ngwa ekwesịrị igosipụta - pịa ya ka ịmalite.
Ọnọdụ nlele ihughari ka "Nnukwu"wee chọta ihe ahụ "Firewall Defender Windows" ma pịa bọtịnụ òké aka ya.
N'aka ekpe bụ menu ọnyà, họrọ ọnọdụ na ya. "Nhọrọ Di elu". Biko mara na iji nweta ya, akaụntụ dị ugbu a aghaghị inwe ikike nchịkwa.
Hụkwa: Inweta ikike nchịkwa na komputa na Windows 10
N'akụkụ aka ekpe nke windo pịa ihe ahụ. "Iwu na-abanye", na n'ime ihe omume - "Mepụta iwu".
Akpa, dozie mgbanwe ahụ na ọnọdụ "Maka ọdụ ụgbọ mmiri" ma pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Na nke a, anyị ga-ebukwu ntakịrị. Nke bu eziokwu bụ na ihe omume niile na-eji ma TCP na UDP, n'ihi ya, ị ga-enwe ike ịmepụta iwu abụọ dị iche iche maka onye ọbụla. Malite na TCP - họrọ ya.
Kpazie igbe ahụ "Ọdụ mmiri dị iche iche" ma dee na akara aka nri nke ya ụkpụrụ ndị a chọrọ. Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke kachasị eji:
25565 - egwuregwu Minecraft;
33033 - ndị ahịa nke netwọk iyi;
22 - njikọ SSH;
110 - POP3 email protocol;
143 - protocol e-mail IMAP;
3389, naanị TCP bụ njikọta njikọta RDP.
Maka ngwaahịa ndị ọzọ, a pụrụ ịchọta ọdụ ụgbọ mmiri dị mma na ntanetị.
N'oge a, họrọ nhọrọ "Kwe Ka Njikọ".
Site na ndabara, ọdụ ụgbọ mmiri na-emepe maka profaịlụ niile - maka ọrụ siri ike nke iwu ọ na-atụ aro ka ịhọrọ ihe niile, ọ bụ ezie na anyị dọrọ aka na nke a adịghị oke nchebe.
Tinye aha iwu (achọrọ) na nkọwa ka ị nwee ike ịnyagharịa ndepụta, wee pịa "Emere".
Tinyegharịa nzọụkwụ 4-9, ma oge a na nkwụsị 6, họrọ protocol UDP.
Mgbe nke ahụ gasịrị, megharịa usoro ọzọ, ma n'oge a, a ga-ahazi iwu ahụ maka njikọ na-apụ apụ.
Ihe ndị ụgbọ mmiri nwere ike ghara imeghe
Usoro a dị n'elu adịghị enye mgbe ọ bụla: a na-asụzi iwu ndị ziri ezi, mana nke a ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri a ekpebisi ike imechi mgbe enyocha. Nke a na-eme maka ọtụtụ ihe.
Ọtụtụ ihe nchebe nke oge a nwere nchekwa nke aka ha, nke na-agafe firewall system Windows, nke chọrọ oghere ndị ebutere ya. Maka antivirus ọ bụla, usoro dị iche iche, mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa, ya mere, anyị ga-agwa ha gbasara ha na isiokwu dị iche iche.
Otu ihe mere na ọdụ ụgbọ mmiri adịghị emeghe site na sistemụ arụmọrụ bụ igbochi ha site n'akụkụ nke router. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ụdị ndị na-eme njem na-enwe mgbidi e wuru na ya, ntọala ndị dị na kọmputa. Usoro maka ọdụ ụgbọ mmiri na-ebute ndị na-eme njem nke ụfọdụ ndị na-ewu ewu ewu nwere ike ịchọta na ntuziaka na-esonụ.
Gụkwuo: Anyị na-emeghe ọdụ ụgbọ mmiri na router
Nke a na - emechi nyocha nke ụzọ maka ịmepe ọdụ ụgbọ mmiri na windo Windows 10.